कोरोना संक्रमणको आशंकामा तीन बालक कान्ति बाल अस्पतालमा भर्ना – News Dainik
कोरोना संक्रमणको आशंकामा तीन बालक कान्ति बाल अस्पतालमा भर्ना
News desk ११ चैत्र २०७६, मंगलवार १०:४७ समाचार प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमणको आशंका तीन बालकलाई कान्ति बाल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनीहरुलाई आइतबार एकजना र सोमबार दुईजना गरी तीनजना बालक अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले कोरोनाको आशंकामा आइतबार भर्ना भएका १४ वर्षीय बालक र सोमबार भर्ना भएका बालकहरु क्रमशः साढे चार र चार वर्षका छन् । तीनै जनाको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरेको छ । ती बालकका अभिभावक कोरोना प्रभावित देशबाट स्वदेश फर्किएको १४ दिन नपुगेको र उनीहरुको सम्पर्कमा रहेका बालकहरुमा कोरोनाको लक्षण देखिएको भन्दै उनीहरुलाई अस्पताल ल्याइएको हो ।
आइतबार आइसोलेसनमा भर्ना भएका बालकका बाबु दुबइबाट फर्किएका र सोमबार भर्ना भएका एक बालका काका चीनबाट र एक बालका बाबु कतारबाट फर्किएको बताइएको छ । त्यसपछि उनीहरुमा कोरोनाका लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको रहेछ अस्पतालका निर्देशक डा. पौडेलले जानकारी दिए ।
अघिल्लॊ ‘लकडाउन’ के हो ? ‘लकडाउन’ उल्लघंन गरे कस्तो कारवाही हुन्छ ?
पछिल्लॊ ला लिगासहित स्पेनका सम्पूर्ण फुटबल गतिविधि अनिश्चितकालका लागि स्थगित
चितवन । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटमा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि सडक अवरुद्ध भएको छ …